Donald Trump oo loo xirey ‘kicinta’ qalalaasaha Capitol ee Mareykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Donald Trump oo loo xirey ‘kicinta’ qalalaasaha Capitol ee Mareykanka
Codbixin taariikhi ah, Aqalka Dimuqraadiga uu hoggaamiyo ayaa markii labaad xilka ka xayuubiya Trump sababo la xiriira kicinta koox weerartay Capitol.
Afhayeenka Aqalka Wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa gudoomineysay codeyntii xil ka qaadista madaxweyne Donald Trump 13-kii January [Jonathan Ernst / Reuters]
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa gudoomineysay codeyntii xil ka qaadista madaxweyne Donald Trump 13-kii Janaayo
Aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa ku soo oogay madaxweyne Donald Trump “kicinta kacdoon” ka dib markii dad aad u tiro badan oo taageerayaashiisa ah ay weerareen xarunta baarlamaanka Mareykanka usbuucii la soo dhaafay, taasoo ka dhigeysa markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka in madaxweyne xilka laga qaado labo jeer.
Go’aanka Aqalka, oo lagu meel mariyey cod 232-197 galabnimadii Arbacada, ayaa sheegaya in ficillada iyo hadalada Trump ka hor duulaanka dhismaha Capitol ee Washington, DC ay kicinayaan rabshadaha.
Go’aanka xil ka qaadista Donald Trump: Qoraal buuxa
Sawiro: Ciidamada ilaalada Qaranka ayaa yimid kahor Caleema saarka Mareykanka
‘Ma jiro qof sharciga ka sareeya,’ Pelosi ayaa ka yiri impeachpe Trump: US News
“Maanta, qaab laba-geesood ah, Goluhu wuxuu muujiyey in qofna uusan sharciga ka sarreynin – xitaa madaxweynaha Mareykanka,” Afhayeenka Aqalka Nancy Pelosi markii ay saxiixday qodobka xil ka qaadista ka dib codeynta.
Qiyaasta, ayuu yiri Pelosi, sidoo kale waxay caddeynaysaa “in Donald Trump uu yahay khatar muuqata oo muuqata oo dalkeenna ku sugan”.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa farriin muuqaal ah oo uu sii daayay Twitter-ka Arbacadii, wuxuu ku sheegay inuu cambaareynayo rabshadihii usbuucii la soo dhaafay ka dhacay Xarunta Capitol [Aqalka Cad ee loo maro Twitter
Toban Jamhuuriyiin ah ayaa ku biiray 222 Dimuqraadiyiin u codeynaya in la rido Trump, taasoo ka dhigeysa codeynta canaan laba geesood ah oo ku saabsan isku dayga madaxweynaha ee lagu doonayo in lagu rogo natiijooyinka doorashada madaxweynaha ee 2020.
Rabshaddii ka dhacday Capitol 6-dii Janaayo waxay sababtay dhimashada shan qof waxayna naxdin ku reebtay Mareykanka iyo adduunka oo dhan, taasoo ku dhiirrigelisay sharci-dejiyayaasha Xisbiga Dimuqraadiga inay billaabaan riixitaan ka dhan ah Trump maalmihii ugu dambeeyay ee Aqalka Cad.
Xarunta Capitol ayaa la weeraray ka dib markii Trump uu khudbad xanaf leh u jeediyay dad badan oo taageerayaashiisa ah oo isugu soo baxay si ay uga mudaaharaadaan shahaadada Koongareeska ee doorashada madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden.
Trump ‘si aan leex leexad lahayn’ wuu cambaareynayaa rabshadaha
Qodobka xil ka qaadista ayaa sheegaya in bilooyin ka hor 6da Janaayo, Trump uu ku celceliyay sheegashooyin been abuur ah oo musuqmaasuq baahsan oo doorashada ku saabsan wuxuuna sheegay in natiijada aan la aqbalin.
Wuxuu sidoo kale “si ula kac ah u sheegay hadallo, macno ahaan, dhiirigelin – iyo sida la filayo u horseeday – tallaabo sharci la’aan ah Capitol, sida: ‘haddii aadan u dagaallamin sida cadaabta oo kale dal ma yeelan doontid mar dambe,'” maqaalka ayaa sheegaya.
Dibadbaxayaasha taageersan Trump ayaa duufaan ku qaaday Xarunta Baarlamaanka ee Mareykanka intii ay socdeen isku dhacyadii ay la lahaayeen booliska bishii Janaayo 6
Trump markiiba ma uusan ka hadlin xil ka qaadistiisa.
Laakiin muuqaal fiidiyoow ah oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee Aqalka Cad fiidnimadii Arbacada, ayuu cambaareeyay weerarkii lagu qaaday xarunta baarlamaanka wuxuuna sheegay in aysan jirin wax cudur daar ah oo loo adeegsado rabshado.
Waxaan rabaa inaan cadeeyo, waxaan si aan leexleexad lahayn u cambaareynayaa rabshadihii aan aragnay usbuucii la soo dhaafay. Rabshadaha iyo wax duminta gabi ahaanba boos kuma lahan dalkeena mana laha wax dhaqdhaqaaqeena ah, ”ayuu yiri Trump.
Madaxweynaha ayaa ku adkaystay talaadadii, isagoo diiday dadaalka xil ka qaadista ee Dimuqraadiyiinta oo uu ku tilmaamay mid khatar ah iyo “sii socoshada ugaarsigii ugu xumaa uguna xumaa ee taariikhda dalkeena”.
Aqalka ayaa magacaabay maamuleyaal si loogu soo oogo dacwadda kacdoonka ka dhanka ah Trump ee dacwada Senate-ka, taas oo aan la fileynin inay bilaabato illaa iyo ka dib caleema saarka Biden.
Taasi waa marka Dimuqraadiyiintu ay diyaar u yihiin inay la wareegaan gacan ku haynta Golaha Guurtida. Ugu yaraan laba xubnood oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Senate-ka ayaa horey ugu baaqay Trump inuu xilka ka dago, mid saddexaadna wuxuu sheegay inay tixgelin doonaan u codeynta xil ka qaadista.
Hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga ee Senate-ka Chuck Schumer ayaa bayaan uu soo saaray ka dib codeynta aqalka baarlamaanka waxaa lagu yiri “ha qaldamin, waxaa jiri doona dacwad xil ka qaadis ah aqalka senate-ka Mareykanka.”
“Waxaa loo codeyn doonaa in madaxweynaha lagu xukumo dambiyada waaweyn iyo dambiyada fudud. Hadana madaxweynaha la xukumo, waxaa loo codeyn doonaa in laga hor istaago inuu markale isa soo sharaxo, ”ayuu yiri Schumer.
Hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee Senate-ka Mitch McConnell ayaa Arbacadii sheegay in Guurtida aysan wax talaabo ah qaadi doonin ilaa Biden la dhaariyo, si kastaba ha ahaatee.
“Waxay sida ugu fiican ugu adeegi doontaa qarankeena haddii Congresska iyo waaxda fulinta ay toddobada maalmood ee soo socota ku qaataan gabi ahaanba diiradda saaraya fududeynta caleemo-saar nabdoon iyo kala-wareejin awood leh oo ku socota maamulka Biden ee imanaya,” ayuu yiri McConnell.
In kasta oo qaar ka mid ah Jamhuuriyeyaashu ay doonayeen inay ka fogaadaan Trump dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ka codsadeen inuu xilka ka dago, qaar badan ayaa wali difaacay Arbacadii iyagoo ku tilmaamay geeddi-ka-qaadista impeach aan loo baahnayn xilli Mareykanku u baahan yahay inuu bogsado.
“Toddoba maalmood gudahood, waxaa jiri doona wareejin xukun oo nabad ah sida ay ahayd waqtiyo kale oo ka dhacay dalkeenna oo dhan, laakiin Dimuqraadiyiintu mar labaad ayay xilka ka qaadi doonaan madaxweyne Trump Tani ma mideyneyso dalka, ”ayuu yiri Jim Jordan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga.
Laakiin Dimuqraadiyiintu waxay yiraahdeen bogsiintu ma bilaaban karto iyada oo aan lala xisaabtamin weerarkii ka dhacay Capitol.
“Dembiyada dastuuriga ah ee uu dhiirrigeliyey madaxweyne aan xakamayn karin, oo ay ku dheehan tahay nacaybkiisa iyo beenta weyn ee uu sheegay in aan la iska indhatiri karin,” ayuu yiri Dimuqraadiga Hakeem Jeffries intii lagu guda jiray dooda Arbacadii.
Iyada oo lahadleysa Al Jazeera codeynta kadib, Ilhan Omar oo ah haweeneyda Koongarayska ka ah xisbiga Dimuqraadiga ayaa tiri “dadka Mareykanka iyo caalamkaba way cadahay sababta aan u hubinay in talaabooyinka [Trump] ay cawaaqib ku yeesheen”.
Waxay ku tilmaamtay xil ka qaadistiisa “ficil la xisaabtan” taasoo abuuri doonta waddo loo maro caddaaladda iyo midnimada Mareykanka.
“Kani waa madaxweyne aan khatar kaliya ku ahayn dimuqraadiyadeenna, dowladdeenna – laakiin wuxuu ahaa madaxweyne adeegsaday hadallo uu ku kala qaybinayo qarankeenna. Markaan awoodno inaan ka saarno waxaan bilaabi karnaa howsha bogsashada, ”ayuu yiri Cumar.
Previous articleDonald Trump impeached for ‘inciting’ US Capitol riot
Madaxwaynihii deegaanka Tigreega Dr. Debretsion Gebremichael oo aan la arkin intii dagaalku dhacay ee uu ka baxay caasimadda deegaankaas ee Maqalle, ayaa duurka kasoo...
Madaxweynihii hore shekh shariif oo goor dhawayd ka soo dagay...